मस्कोमा बैंक स्थानान्तरणद्वारा कानूनी संस्थाहरूको लागि फूलहरू वितरण संस्थाको सेटलमेन्ट खाताबाट भुक्तान
मस्कोमा बैंक स्थानान्तरणद्वारा कानूनी संस्थाहरूको लागि फूल वितरण।
कानुनी निकायको रूपमा फूलहरू अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ। मस्कोमा बैंक खाताबाट भुक्तानी भएको व्यक्ति?
बैंक स्थानान्तरण द्वारा अर्डरिंग सजिलो छ!
के तपाईं अहिल्यै फूलहरू अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ? - मात्र को लागी एक गुलदस्ता छनौट गर्नुहोस् फ्लोरिस्टम.रू मस्कोमा, र अर्डर पृष्ठमा, भुक्तान विधि "कानूनी संस्थाका लागि गैर-नगदी" चयन गर्नुहोस्, विवरणहरू भर्नुहोस् र एक सम्झौता तुरून्त तपाईंको मेलमा पठाइने छ र एक चलानी जारी गरिनेछ।
के तपाईं अग्रिममा सम्झौता गर्न र अग्रिम भुक्तानीमा फूलहरू अर्डर गर्न चाहानुहुन्छ? - कृपया हामीलाई तपाईंको आशयका बारे लेख्नुहोस्: কর্পোরেট@floristum.ru वा कल गर्नुहोस्: 8 800 600-54-97.
साइटमा प्रस्तुत मूल्यहरूमा गुलदस्ताहरूको वर्गीकरण सार्वजनिकको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ फूलहरूको लागि व्यावसायिक प्रस्ताव कानूनी संस्थाका लागि।
सँग काम गर्ने फाइदाहरू फ्लोरिस्टम.रू मस्कोमा कानूनी संस्थाका लागि
(वितरण संग फूलहरूको लागि व्यावसायिक प्रस्ताव):
गुलदस्ते एकल सम्झौता अन्तर्गत मस्को र रूसको कुनै पनि शहर मा दिन दिन वितरण।
एउटा सम्झौता समाप्त भएपछि, तपाईं रूसको कुनै पनि शहरमा फूलहरू र उपहारहरू अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ फ्लोरिस्टम.रू संचालित हुन्छ, र यी सयौं बस्तीहरू हुन् जहाँ तपाईंको ग्राहकहरू र सहकर्मीहरू बस्छन्!
संस्थाको बैंक खाताबाट फूलहरूको लागि भुक्तान।
LLC "FLN" (Floristum.ru) बाट तपाईंको कानुनी निकायको विवरणमा एक गुलदस्ता अर्डर गर्ने फारमको माध्यमबाट चलानी सरल स्वचालित प्रणाली। तपाईंले कहिँ पनि लेख्नु पर्दैन, बिल कल गर्नुहोस् र माफ गर्नुहोस्, प्रणाली तपाईंले निर्दिष्ट गर्नुभएको ईमेल ठेगानामा एक चलानी जारी गर्दछ।
हजारौं गुलदस्ते को लागी उपलब्ध फ्लोरिस्टम.रु मस्कोमा!
रूसको कुनै पनि शहरमा कुनै पनि शहरबाट डेलिभरी अर्डर गर्नुहोस्! तपाईं सबैलाई शहर निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ, फूलहरूको उपयुक्त गुलदस्ता छनौट गर्नुहोस् र वितरणका लागि प्यारामिटरहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
गुलदस्ताहरूको कम लागत।
फ्लोरिस्टम.रू एक संसाधन हो जहाँ फूल पसलहरू र होलसेल कम्पनीहरूले उनीहरूको पेशेवर गुलदस्ता र संयोजन प्रस्ताव गर्छन्। जब तपाईं यहाँ शपिंग गर्नुहुन्छ, तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईंले पेशेवरहरूलाई एक आकर्षक मूल्यमा एक ठूलो गुलदस्ता प्राप्त गर्नुहुनेछ।
हजारौं फूलका पसलहरूबाट अर्डर गर्नका लागि एउटा अनुबन्ध
एउटा सम्झौता समाप्त गरेर, तपाईले पाँच हजार आउटलेटबाट फूलहरू खरीद गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ। पोर्टलमा सबै स्वादको लागि गुलदस्तेहरूको वास्तवमै विशाल चयन छ। कल्पना गर्नुहोस् - एक सय भन्दा बढी। र तपाईं तिनीहरूलाई दुई क्लिकमा किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले भर्खर आफ्नो विवरणहरू सुविधाजनक फारममा प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ, र भविष्यमा तिनीहरू स्वचालित रूपमा अर्डर फारममा थपिनेछन्।
धोखाधडी र खराब गुण सेवाहरू बाट संरक्षण।
अर्डर र इन्टरनेट को माध्यम बाट सेवाहरु को लागि भुक्तान गर्दा, यो स्क्यामर को चाल को लागी पनी गाह्रो छैन र आफ्नो पैसा बर्बाद, वा बस एक गरीब गुणवत्ता सेवा खरीद। फ्लोरिस्टम.रू पोर्टलमा ग्राहक संरक्षण प्रणाली छ। जबसम्म तपाईंको अर्डर पूरा हुँदैन, फ्लोरिस्टले यसको लागि पैसा प्राप्त गर्ने छैन। यसले कार्य गरेको गुणवत्ता, बस्तीहरूको सुरक्षा र ग्राहकलाई फिर्ता रकमको १००% ग्यारेन्टी दिन्छ।
परेशानीमुक्त बन्द कागजातहरू।
अर्को फाइदा यो हो कि सम्झौता बन्द हुने कागजातहरू तपाईको एकाउन्टेन्टमा रिमाइन्डरहरू बिना स्वचालित रूपमा पठाइन्छ। रसिदहरू, स्क्यानहरू, खरीदहरूको रिपोर्टहरू स collecting्कलन गर्ने बारे बिर्सनुहोस्। अब, तपाई भर्खर तपाईको मेलिंग ठेगानामा वास्तविक प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईको ईमेलमा स्क्यान गर्दछ। यो सरल र धेरै सुविधाजनक हो!
हालको खाताबाट भुक्तान गर्दा हामीसँग अतिरिक्त शुल्कहरू छैनन्।
फूलहरूको लागि मूल्य एक व्यक्ति जस्तै हो। व्यक्तिहरू:
चकलेट - १ पीसी
मिठाई संग एक भव्य रचना!
२ 3730 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २321०
हिउँ सेतो स्प्रे गुलाबको भव्य गुलदस्ता।
२ 21767 XNUMX ₽ White१ सेतो स्प्रे गुलाबको गुलदस्ता
21 Белая роза 40 см завязаны атласной ленты прекрасно подойдёт за подарок для любой женщины.
२ 2700 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २17०
प्रियजनहरूका लागि एक ठाठ उपहार
२ 3950 XNUMX ₽ उज्यालो गुलाब
सेतो र नीलो टोनमा सेतो मिनी-गेर्बेरा p पीसी, नीलो आइरिज 7, नीलो र cha्ग भएको क्यामोमाइल क्रिसेन्थेमम p पीसी, सानो क्यामोमाइल १० पीसी, अमोनिया p ​​पीसी, सलाल १ प्याक, प्याकिंग।
२ 6250 XNUMX ₽ फूलहरूको गुलदस्ता "कोर्नफ्लावर्स-क्यामोमाइल"
गर्मीको लागि पर्खिरहेकाहरूको लागि डेसिजको एक मुट्ठी
२ 3280 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २209०
हिउँ सेतो इक्वेडरियन गुलाब मसलाको रूसी संग मिल्दोजुल्दो - एक अद्वितीय कोमलता। प्याकेजि and र साटन रिबनले सबै कुराको पूरक गर्दछ। परिवार र साथीहरूलाई आफ्ना भावनाहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
२ 5850 XNUMX ₽ समुद्री फोम
शिल्पमा ११ रातो गुलाबको त्यस्तो गुलदस्ता निश्चित रूपमा सान्दर्भिक र फैशनेबल उपहार बन्नेछ!
२ 4381 XNUMX ₽ शिल्पमा ११ रातो गुलाबको गुलदस्ता
कम मूल्यको साथ सबै गुलदस्ते हेर्नुहोस्